Suldaan Axmed Maxamuud M Hurre iyo Dhammaan Soomaalidii Kale oo Laynooga Diley Amarka Hororka Dagaal Oogayaasha la Midka ah
Sabti, 21 Agoosto 2004 ayaa kulan ku saabsan mowduuca kor ku xusan lagu qabtay cinwaanka: 130 Brookhill Road ee Degmada Woolwich ee waqooyi-bari London. Shirkan oo socday 3 saacadood iyo 15 daqiiqo (2.30-6.45 p.m.) waxaa sidii caadadu ahaan jirtey soo qabanqaabiyey xubno ka tirsan saaxiibbadii iyo eheladii Suldaan Axmed Hurre (Raximahullaah) iyo xubno kale oo u halgama nabadda, caddaaladda iyo xuquuqul insaanka waxaana ka soo qaybgalay waxgarad/aqoonyahan badan oo Soomaaliyeed kana kala yimid degmooyinka London. 90% ka qaybgalayaashu waxay ahaayeen jaaliyadda reer Puntland.
Sida la wada ogyahay, Suldan Hurre waxaa dilay ilaalada gaarka ah ee kornaylka isaguna uu la socdo ama galbinaysa.
Dilku wuxuu ka dhacay tuulada Kala-bayr ee Gobolka Nugaal una jirta qiyaas 60-70 mile magaala madaxda Puntland ee Garoowe.
Suldaan Hurre wuxuu ka mid ahaa madax-dhaqmeedyadii sida cad u diiday (fiiri qoraalladaan) kororsigii sharci darrada ahaa ee uu Cabdullahi Yuusuf ku doonayey inuu ku sii haysto madaxtinnimada Puntland ka dib markii uu dhammaaday xilligii saddexda sano ee jiritaankii xukuumaddii kowaad ee Puntland bartamihiisa 2001kii.
Munaasabaddii kulanka waxaa lagu bilaabay ayadoo lagu furay aayado Qur’aanka Kariimka iyo muxaadaro diini ah oo cinwaankeedu ahaa “dulmiga” uuna soo jeediyey Fadiilata Sheikh Xasan Takar oo ka mid ah Culimmada Soomaaliyeed ee caanka ah.
Ka dib waxaa hadalkii la wareegay ka qaybgalayaashii iyo qabanqaabiye-yaashii waxaana ka hadlay 17 xubnood oo dhammaantood mowduuca uga hadlay siyaabo kala duwan hase yeeshee nuxur iyo ujeeddo isku mid ah.
1. dhammaan intii hadashay oo badankood aqoon fiican u lahaa marxuumka, waxay wada qireen inuu ahaa nin ay u dhan yihiin calaamadaha qofka wanaagsan sida: islaamnimo, caddaalad jecayl, asluub wanaag iyowaddaninnimo ay ka go’nayd la dagaallanka dagaal oogayaasha uu ka mid yahay kornayl Cabdullaahi Yuusuf si looga xoreeyo guud ahaan Somaaliya gaar ahaanna Puntland. Waxaa intaas u dheeraa isagoo ahaa nin dhallinyar jaamicina ah markaana dadkiisa iyo dalkiisa ku badbaadinayey labadaas door/kaalin (role): Isim iyo Agoonyahan.
2. dhammaan waxay wada xuseen iskuna wada raeen in dilkii Suldan Axmed Hurre uu ahaa mid waxshinimo iyo ayadoo aysan jirin wax sabab (walow uu Cabdullaahi Yuusuf ugu magac daray mid siyaasadeed) ah oo uu qaadan karo caqliga fayoobi, hase yeeshee uu ka mid ahaa afcaasha waallida iyo qar-iska tuurnimada ee kornaylka oo aan xitaa u aaba yeelin madax-dhaqameedyada Soomaaliyeed.
3. dilkii Suldaan Hurre waxay ahayd dhacdo ugub ku ahayd gayiga Soomaaliya maadaama uu ahaa Hoggaan/Duub dhaqameedkii ugu horreeyey oo lagu dilo sabab siyaasadeed (waa haddii lo raaco ta kornaylka).
4. waxaa nasiib darro noqotay, in Isimmada Soomaaliyeed ama gaar ahaan kuwa Puntland aysan dilkii Suldaan Axmed Hurre ka qaadan doorkii ama kaalintii uga aaddanayd oo laga filayey. Gabitaanka kaalintooda waxaan ku sababayn karnaa, in ay tahay iyagoo in yar mooyaane ay inta kale isu dhiibeen dagaal oogayaasha. Sidaynu badi ula wada soconno, waxaa Duub dhaqameedka Soomaaliyeed hore uga siibey hal “xiniin” ama “raay”(wadar = raayo) nidaamkii regiimkii askarta ee October 69; tii u hartayna waxaa ka siiyey dagaal oogayaasha ka dib burburkii Qarankii Soomaaliya. Kuwa Puntland ayagu kumaba sii jiraan: 60% waa kuwa been ama (fake) ah oo uu samaystay Cabdullaahi Yuusuf dhowrkii sano oo la soo dhaafay; 35% isaga ayay isu dhiibeen kadib dilkii Suldaan Hurre (oo waa waysha gowrac dibigu ha ku quustee ama nin asaaggiis loo xiirayow adiguna soo qoyso. Labadaan noocba kornaylka ayaa hadda u gaardisiiya sidii askartii wax kasta oo rabana waxay ku aqbalaan sacab sida kuwa uu ugu yeero golaha xildhibaannada. 5%ta soo hartay waa kuwo diyaarsaday kafantoodii sidii Suldaan Axmed oo qaarna ka cararay dalka, qaarna aanba loo oggolayn in ay cag dhigaan meel looga hadlayo danta guud sida Garaad Cabdiqaniga reer Laas-Caanood iyo Suldaan Siciid Irbad.
5. talada aannu u soo jeedinayno kooxahaa kore waxay yihiin: 60% lagu sheegay wax aysan ahayn waxaannu leennahay: beeni lugo gaaban ayay leedahay ee yuusan kornayl Cabdullaahi yuusan idiinka tegin idinkoo huwan “shaalal iyo koofiyado ceebeed” markaana dadkiinna ha ku noqonnina eelkii uu ayaxu ka tegey (ayax teg eelna). Xil sharafeed waa ka uu dadkaagu kuu doorto kuguna aammino ee maaha mid dhoo-dhoob ah oo uu kugula kufo nin doonaya inuu kugu danaysto oo kaa dhigto jaranjaro uu ku fuulo meel sare. Xilkii uu kuu dhiibaa waa mid ceebeed, xurquunkii aad ka cuntaa waa mid xaaraan ah, Alle iyo ummadduna way kugu ogyihiin waxa aad ku kacaysid ugu dambaynna waxaa aakhiro kaaga horreeya wixii aad kasbatay ama kaydsatay. 35% ka ah Isimmada runta ah, hase yeeshee ka aamusan xaqa cabsi daraadeed, waxaannu leennahay, haddii aad cid ka cabsanaysaan ka cabsada Alle. Idinkuma habboona, in aad isu dhiibtaan nin aan dadkiinnu dooran idinkoo uu boqran dadkiinna kana sharaf iyo mas’uuliyadba badan. 5%ta waannu u ducaynaynaa in ay dhowreen sharftayada iyo toodaba, waannu idin garab taagan nahay, waxaannuna idin leenahay ku socda dariiqaas xaqa ah oo aad doorateen kuna dhinta sidii Suldaan Hurre.
6. waxaannu dhaliilsan nahay doorka dadweynaha soomaaliyeed kana codsanayno in ay u istaagaan danta guud kana hortagaan dagaal oogayaasha wiilashooda u tumaya durbaanka caaddifadda qabiilka uguna shaqaysanaya sidii calooshood u shaqaystayaal si ay u laayaan dadkooda.
Kulankii wuxuu ku dhammaaday dood ama workshop socday muddo hal saac iyo daqiiqo ah layskulana meel dhigay qodobbada soo socda:
o in la bilaabo kulammo laysugu yeero jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Ingiriiska si looga wada hadlo wixii laga yeeli lahaa danaha guud oo ka dhexeeya ummadda Soomaaliyeed
o In la abuuro wacyi gelin sidii ummadda Soomaaliyeed looga samata bixin lahaa musiibada ay ina badeen dagaal-oogayaashu,
o Sidii dagaal-oogayaasha looga jari lahaa taakulaynta lacageed oo ay ka helaan dibadda,
o In la sameeyo wax-garad talooyin ku biiriya ummadda Soomaaliyeed, iyo sidii loola dagaallami lahaa dulmiga iyo xaq-darrada,
o In jaaliyadda Soomaaliyeed ay xoogga saaraan siday degganaashahooda dalka Ingiriiska u xoojin lahaayeen
o In wixii macluumaad ah oo ku saabsan ku xadgudubka xuquul insaanka lagu soo uruuriyo Website/ka loogu magac daray SHHRF
Waxaa aad loo xusay dulmiga ay sameeyaan dagaal-oogayaasha ay taakulaynta ka helaan dibadaha. Iyadoo la ogsoon yahay inay adag tahay midaynta jaaliyadaha dibadda, misna waxaa aad looga dooday inay lagama maarmaan tahay in meel un laga bilaabo badbaadinta ummadda Soomaaliyeed.
Kulankii waxaa la soo gebagebeeyay markay saacaddu ahayd 06:45 iyadoo awal ku tala-galkii uu ahaa ilaa saacadda 05:00 galabnimo.
Saaxiibbada iyo qabanqaabiyeyaasha kulanku waxay aad ugu mahadcelinayaan ka soo qaybgalayaasha kulanka iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo ummadaha kale ee jecel nabadda iyo caddaaladda.
Waxaannu u tacsiyaynaynaa dhammaan qoysaskii, eheladii iyo saaxiibbadii intii naf iyo maalba wax ku noqotay afcaasha shaydaannimo ee dagaal-oogayaasha.
Ugu dambeyn waxaanna Alle ka baryaynaa inuu noogu yabooho nabad iyo dawlad caaddil ah oo nagu hoggaamisa xaqa.
Warkaan kala xiriir::: webmaster@suldanhurre.org
Qoraal ka soo baxay "Sultan Hurre Human Rights Focus (SHHRF)".. Guji..
Faafin: SomaliTalk.com | Agoosto 22, 2004